လေဆာ Filtration အထည်အလိပ်အလတ်စားလေဆာ Solutions ဖြတ်တောက်ခြင်း, Filter ကိုပိတ်စဖြတ်တောက်ခြင်း - ဝူဟန်ရွှေ laser Co. , Ltd မှ
Solutions ဖြတ်တောက်ခြင်း Filter ကိုအဝတ်အစား, Filtration အထည်အလိပ်အလတ်စားလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာ
GOLDEN laser နှင့်အတူမြန်ဆန်တိကျတဲ့နဲ့ automatic လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း filtration ထည်အလတ်စားစက်ဖြတ်တောက် CO2 လေဆာ flatbed ။
စက်မှုဇုန်ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲခွဲခြာ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့-အရည်ခွဲခြာ, Solid-အရည်ခွဲခြာ, Solid-အစိုင်အခဲခွဲခြာတစ်ဦးထံမှအရေးကြီးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ် Filtration, နေ့စဉ်အိမ်ထောင်စုကရိယာအတွက်လေကောင်းလေသန့်စင်ခြင်းနှင့်ရေသန့်စင်ရန်, filtration ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပြီး မျိုးစုံဒေသများ။ ထိုကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ, သံမဏိစက်များ, ဘိလပ်မြေစက်ရုံများနှင့်အခြားစွန့်ပစ်ဥတုကုသမှု, အထည်အလိပ်နှင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလေကြောင်း filtration, မိလ္လာကုသမှုစသည်တို့ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း filtration Crystal, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းလေထု, ရေနံ filtration နှင့်အိမ်ထောင်စုလေအေးပေးစက်, လေဟာနယ်သန့်စင်သောလေထု filtration အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် applications များ ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ filter ကိုပစ္စည်းများကိုအဓိကအားဖြင့်ဖိုက်ဘာပစ္စည်းများ, ယက်အထည်နှင့်သတ္တုပစ္စည်းများ, အထူးသဖြင့်အမျှင်ဓာတ်ပစ္စည်းများပါဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်, အဓိကအားဖြင့်ဝါဂွမ်း, သိုးမွှေးပိတ်, ဖဲ, ထဲမှာပါတဲ့အမျှင်ဓာတ်, polypropylene, နိုင်လွန်, polyester, acrylic, nitrile နှင့်အခြားဒြပ်အမျှင်များမှာ စသည်တို့ကိုအဖြစ်ဖန်ဖိုင်ဘာ, ကြွေဖိုင်ဘာ, သတ္တုဖိုင်ဘာ,
filtration များ၏လျှောက်လွှာကိုလယ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်သကဲ့သို့, filtering ကိုပစ္စည်းများကိုအဆက်မပြတ် updated လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ filtration ထုတ်ကုန် dustproof အထည်, ဖုန်မှုန့်အိတ်, filter ကို Screen, filter ကိုကျည်တောင့်, filter ကိုစည်, filter ကိုဝါဂွမ်းကနေစစ်ထုတ် core ကိုမှဖြစ်ကြသည်။
Laser ဖြတ်တောက်ခြင်း Filter ကိုပိတ်စ
အကြီးစား format နဲ့ CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လေဆာရောင်ခြည်များကအောင်မြင် filtration non-အဆက်အသွယ်လုပ်ငန်းစဉ်အလတ်စားကျေးဇူးတင်စကားနှင့်မြင့်မားသောတိကျဖြတ်တောက်ဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အပူလေဆာဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထည်ဖြတ်တောက်အခါဖြတ်တောက်အနားအလိုအလျှောက်ကိုတံဆိပ်ခတ်သေချာ။ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ် filter ကိုအထည်တိရစ်ဆာနျမ စ. နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာသည်။
အကောင်းမြင်ရလဒ်အတွက်ဖြတ်တောက်-EDGE laser နည်းပညာ
လေဆာနှင့်အတူ filter ကိုအထည်ဖြတ်တောက်၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ?
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း filter ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်
စွယ်စုံ။ အားလုံးနီးပါး filter ကိုပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်း
စင်ကြယ်သော။ non-အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် Non-မြေမှုန့်
one-ခြေလှမ်း။ rework ရန်မလိုအပ်
ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး။ အဘယ်သူမျှမ tool ကို wear, လျော့နည်းစည်းစိမ်
ပေါ်ကိုနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များနှင့်အတူ automated ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို
filter ပစ္စည်းများ ပို. ပို. အသေးစိတ်တွင်းလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် Micro-ပေါက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ရိုးရာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများအဆိုပါထူထောင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါလေဆာအမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက် filter ကိုပစ္စည်းအဘို့အပေါက်တွေလာကြတယ်နိုင်ပါတယ်။
ချောမွေ့ဖြတ်အနား။ ကို cut အနား၏အလိုအလျောက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း - အဘယ်သူမျှမဖွာ။
အဘယ်သူမျှမအထည်အလိပ်ပုံပျက် - ကြောင့် Non-အဆက်အသွယ်လေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့ရန်။
filter ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Applications ကို
•ဖုန်စုဆောင်းခြင်းအိတ် / Filtration စာနယ်ဇင်းအထည် / စက်မှု filtration ခါးပတ် / Filter ကိုကျည်တောင့် / Filter ကိုစက္ကူ / mesh ထည်
• Air ကို Filtration / Fluidization / အရည် filtration / နည်းပညာပိတ်ထည်
•ခြောက်သွေ့ / ဖုန် Filtration / စစ်ဆေးခြင်း / Solid filtration
•ရေ filtration / စားနပ်ရိက္ခာ filtration / စက်မှု filtration
•သတ္တုတွင်း filtration / ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ filtration / ပြော့ဖများနှင့်စက္ကူ filtration
လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သော filter ပစ္စည်းများ
filter ထည်, ဖန်ဖိုင်ဘာ non-ယက်ထည်, စက္ကူ, အမြှုပ်, ဝါဂွမ်း, polypropylene, polyester, polyamides, နိုင်လွန်, PTFE, Sox ပြွန်နှင့်အခြားစက်မှုဇုန်ပိတ်ထည်။
နောက်ထပ်နမူနာလေဆာများက Done ကိုကြည့်ပါ
ကျနော်တို့ filter ကိုအထည်ဖြတ်တောက်များအတွက် Flatbed CO2 လေဆာစက်အကြံပြု
ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေး & နှစ်ဆ Servo drive ကိုရွေ့လျားမှုစနစ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်ရေး။
ခါးပတ်ဂီယာစနစ်ဖြင့် CO2 ပြားချပ်ချပ်အိပ်ရာလေဆာစနစ်၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်။
ကြီးမားသော-format ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပစ္စည်းများအတွက် CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။
စက်များဖြတ်တောက်ခြင်းပို CO2 လေဆာ Read
အသေးစိတ်အတွက် GOLDEN laser JMC စီးရီးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမြင့်မားသော Precision CO2 Flat အိပ်ရာလေဆာ Cutter
ထိန်သိမ်း & တောင်တော်အမွေး
အမြင့်တိကျစွာထိန်သိမ်း & တောင်တော်အမွေးမောင်းနှင်မှုစနစ်။ 1200m / s ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းတက်, 10000mm / s အထိ ACC 2, ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးထိန်းသိမ်းရန်။
တည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်ခံကမ္ဘာ့ဖလား-class ကို CO2 သတ္တု RF လေဆာမီးစက်။
ပျားလပို့ပေါ်ကိုအလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာစုပ်ယူလေဟာနယ်။ လေဆာရောင်ခြည်ကနေပြားချပ်ချပ်, အလိုအလျှောက်, အနိမ့်ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် "INK ဂျက်ပရင်တာ" အတူတူတစ်ချိန်တည်းမှာဖြတ်တောက်အတူ။
1. စက်ဝိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ဝိုင်း 2. Print
YASKAWA Servo motor ကို
ဂျပန် YASKAWA Servo motor ကို။ မြင့်မားသောတိ, တည်ငြိမ်အမြန်နှုန်း, Overload စွမ်းရည်။
အလိုအလျောက် Sorting စနစ်
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်စုစည်းခြင်းစနစ်။ တစ်ကြိမ်မှာ sorting, ပစ္စည်းနို့တိုက်ကျွေးရေး, ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ပါ။
GOLDEN laser JMC ဆောင်းပါးတွဲကို CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ရွေးချယ်နည်း
1. Precision တင်းမာမှုနို့တိုက်ကျွေးရေး
အဘယ်သူမျှမတင်းမာမှုလမ်းခွဲလွယ်သာမန်ဆုံးမခြင်း function ကိုမြှောက်ကိန်းရလဒ်သည်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မူကွဲဖျက်ပေးရန်တော်မူမည် တင်းမာမှုလမ်းခွဲ တစ်ချိန်တည်းမှာပစ္စည်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင် fixed တစ်ဦးပြည့်စုံအတွက်အလိုအလျှောက်, roller အားဖြင့်တင်းမာမှုနှင့်အတူအားလုံးလုပ်ငန်းစဉ်အထည်ပေးပို့ဆွဲထုတ်အတူကပြီးပြည့်စုံသောဆုံးမခြင်းနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးတိကျပါလိမ့်မည်။
ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးရွေ့လျားမှုစနစ်က High-ပါဝါလေဆာရောင်ခြည်ပြွန်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး, 1200 မီလီမီတာ / s ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းမှရောက်ရှိ, 8000 မီလီမီတာ / s ကို 2အရှိန်မြန်နှုန်း။
3. အလိုအလျောက် sorting စနစ်က
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်စုစည်းခြင်းစနစ်။ ပစ္စည်းနို့တိုက်ကျွေးရေး, တစျခုတစ်ကြိမ်မှာ sorting, ဖြတ်တောက်။
2300mm × 2300mm (90,5 လက်မ× 90,5 လက်မ), 2500mm × 3000mm (98.4in × 118in), 3000mm × 3000mm (118in × 118in), ဒါမှမဟုတ် optional ကို။ အကြီးဆုံးအလုပ်လုပ်ဧရိယာ 3200mm × 12000mm (126in × 472.4in) ထိဖြစ်ပါသည်
အရေးယူအတွက် filter ကိုအထည်များအတွက်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် Watch!
ကျနော်တို့လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, လေဆာထွင်းထု, လေဆာရောင်ခြည်တန်းဖောက်ခြင်းနှင့်လေဆာ marking အပါအဝင်ပြည့်စုံလေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ, ရှိသည်။ ကျနော်တို့လေဆာဖြစ်စဉ်ကိုဒေတာစုဆောင်းခြင်း၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆာစက်နှင့်သင်၏ပစ္စည်းများစမ်းသပ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယို, အပြောင်းအလဲနဲ့ parameters တွေကိုနှင့်အခြားဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်စမ်းသပ်နမူနာတာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ဖောက်သည်-oriented, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရှာဖွေစူးစမ်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်လေဆာ application ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီခြင်းဖြစ်ရပြီ။ GOLDEN laser အများအပြားလျှောက်လွှာနယ်ပယ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည် ဖြစ်. , ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအရေအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်အဆင့်မှာရှိပါတယ်။